Maqalee bakka haleellaan xiyyaara waraanaatiin itti geggeeffame, Onkoloolessa 20, 2021, Tigraay
Mootummaa Itiyoophiyaa guyyaa sadaaffaadhaaf Tigraayii keessatii haleellaa xiyyaara waraanaatiin raawachuu isaa dubbii himaa mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Leggesee tulluu waabefachuudhaan maddi oduu Rooyiters gabaaseraa.
Akka gabaasin kun jedhetti haleellaan guyyaa sadaffaaf raawwatame kun kan irraatti akeekamee bakkaa waraanii leenjii itti fudhatu yemmuu ta’u, mooraan sun kanaa dura buufata waraanaa mootummaa federaalaa Ajaja kaabaa kan tureedha jedhameera.
Dubbi himaan Adda Bilisummaa Umaata Tigraay obbo Geetachoo Raddaa akka madda oduu Rooytaritti himanitti , kamisa har’aa xiyyaaronii waraanaa magaalaa maqalee irraa deddebi’anii balali’aa turan. Haa ta’u malee, Maqalee irrati haleellan isaan raawwatan akka hin jirre Obbo Geetachoon himuu isaanii Rooyoters dabalee gabaseera.
Karaa biraatiin guyyaa kaleessaa magaala Maqalee keessatti kan argamu masfin injineeriing irratii haleellaa raawwatameen namoottan 15 madaa’uu isaanii gabaasaan VOA Mulugeetaa Atsibahaa Maqalee iraa gabaaseera.
Namoottan haleellaa kanaan mada’anii Hospitaala Hayidar keessatii waldhamaa jiraa akka himanitti Masfin injineering yero ammaa wanneen tajaajila Siviilotaaf oolan malee meeshaa waraanaa akka omishaa hin jire dubbatanii haleellaan mootummaan raawwate siviilota irraati kan xiyyeefate akka ta’e himaniiru.
Daarikteerrii kutaa wala’ansa atattamaa hospiitaa Haayidar obbo Germaay Laggaas akka jedhanitti namoottan balaa sanaan madaa’nii hospitaala seenaan keessaa namoonii lamaa midhaa cimaan irra gaheeraa.
Haleellaa kana ilaalichisee prezidaantii mootummaa naannoo Tigraay kan jedhamaan Dr Debretsiyon Gebremikaa’el ibsaa barreeffamaan keenaniin, mootummaan Itiyoophiyaa namoottan nagaa irraatti haleellan inni raawwate dhumiinsa namoottan nagaa dabaluu danda’a malee dhugaa lafa irra jiruu hin jijjiruu jechuu isaanii kan gabaase Mulugeetaa Atsibahaa, bakkeewan balaan haleellaa itti raawwatamee ijaan argee bakkaa qabeenyaa siviilotaa irraatii midhaan qaqabuu isa ibseera.